Dilka Safiyo C/raxmaan: Ciidamada dawladdu ma mari karaan dariiqyada ayagoo aan dad layn? | Bosaso Media News
Dadka deegaanku waxay sheegeen in dilkeeda uu yimid markii uu askarigu rasaas ku riday mooto-bajaaj ay saarnayd, “isagoo doonayey inuu rasaasta waddada ku furto”.
Image captionCabdirisaaq Qaasim wuxuu ahaa sawir qaade u shaqeeya TVga SBS, askarigii dilayna lama soo qaban
Image captionDhowr ka mid ah darawallada Bajaajyada ayaa ku dhintay gacanta ciidanka dawladda
“Aad ayey u xanuun badan tahay in bulshada dadkeedii waxgalka ahaa la dilo” ayey tiri.
“Aragtida bulshada waa in askarta dawladda ay yihiin saaxiibka ugu dhow, laakinse ma jiri karto qaab ay saaxiib ku noqon karaan haddii aysan jirin cid xuquuqdoodi ka hadlaysa. Way xanuun badan tahay in dadka indhahoodii la dilayo oo haddana uusan Shabaab sheeganaynin ee la leeyahay askarta dawladda ayaa dishay, dadkiina ay dawladdii aaminsan yihiin oo ay la joogaan” ayey sii raacisay Muna.
BBC waxay la xiriirtay afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliya Gaashaanle sare Qaasim Axmed Rooble oo u sheegay in askarigii dilay macallimadda uu iskiis isu soo dhiibay, kiiskiisana sharciga loo gudbin doono, wuxuuse intaa ku daray in ay “rasaastu ka fakatay askariga”.
Image captionAfhayeenka ciidanka booliska G/sare Qaasim Axmed Rooble
Askariga waan haynaa, sharciga ayaan hor gaynaynaa wixii uu ka helo ayuuna leeyahay” ayuu yiri kornayl Qaasim oo intaas ku daray in marxuumadda maanta la aasay.
Mar ay BBC weydiisay dadkii dilalka kale gaystay ee aan loo qaban wuxuu sheegay in “gudahana aysan ku fakan doonin, dibaddana ay la kaashan doonaan booliska caalamiga ah ee Interpol sidii loo soo qaban lahaa”.
Waxaa intaas dheer sida ay aaminsan yihiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha “in si toos ah iyo si dadbanba dadka canshuur looga qaado, ayna mudan yihiin in amnigooda la sugo, haddii aan la sugi karinna ugu yaraan ay ka nabad galaan xabbadda kaga imaanaysa ciidanka dawladda”.